Archive du 15-oct-2020
Big Mj, Abel Anicet : akaikinny fonny reniny
Misy fomba fiteny milaza hoe : ao ambadiky ny lehilahy iray tafita dia misy vehivavy matanjaka mijoro. Matetika ny vadinilay lehilahy no resahina aminizany izay isanny tena manohana azy tokoa,
Maska aminny akora natoraly : mandaitra vetivety raha
Be dia be ny karazana maska vita aminny akora natoraly sy namboarina ao an-trano saingy maro be koa ireo vehivavy no mitaraina fa tsy mandaitra akory izany.
Manatevina volo ny zavoka
Sahirana ireo olona manify volo matetika. Mba hanome endrika azy mibontsibontsina sy hatevina dia misy maska iray, sady manatsara ny kalitaonny volo ity, no mampatevina azy ihany koa.
Vovoka kanelina ½ sk · Vovoka jirofo ½ sk · Vovoka kotomila ½ sk · Sira 1 tsongo · Dibera na menaka 4 sf · Nofonakoho 600g · Siramamymisy lavanila 1 sk · Sôkôla 30g · Sésame 2 sf · Tongologasy hasiny 2 · Rano 500ml · Ronakoho 500ml · Tongolo be notetehina manify · Amande 5 sf · Voatabia 3 efa novoasana sy notetehina manify · Raisin sec 125ml · Sakaymaina 10 Fikarakarana azy
Floribis : Mpamokatra ranomanitra sy akora avy aminny lavanila, fantatra eran-tany
Orinasa misehatra aminny fitrandrahana sy fanodinana lavanila havadika ho akora azo ampiasaina isanandro ny Floribis.
Matavy noho ny horimonina
Mifandray ny fitomboan-danja sy ny tsiry mpanentana na ny horimonina ho anny vehivavy.
Bevohoka : Tandremo ny fahadiovana rehefa mafana!
Mila mitandrina be aminny resaka fahadiovana sy fidiovana aminny faritry ny fivaviana ny vehivavy bevohoka.
Shopping « Bio »
1. Huile de soin pour cheveux (repousse  antichute- anti-pelliculaire)- 15000ar le pot de 100g  Page Facebook « Beurre de cacao Bio » - Contact : 034 51 490 77
Tosi-drà miakatra : Tonio aminny ravina oliva!
14, raha ambony indrindra, ary 9, raha ambany indrindra, ny tosi-drà ara-dalàna.
Bonara Be Production: nanokatra toerana fandraisam-peo vaovao eny 67Ha
Toerana fandraisana ireo mpanakanto aminny cabaret sy fanaovana lanonana no tena ahafantarana ny Bonara Be.
Faha-62 taonanny Repoblika voalohany Notsarovana ny filoha Philibert Tsiranana
Raha tokony hisy ny fankalazana makotroka entina hahatsiarovana ny tsingerin-taona faha-62 nahazoani Madagasikara ny Repoblika voalohany, omaly 14 oktobra dia niova izany.
« Fotsimaso » : Ganagana dia tsy misy afa-tsy eto Madagasikara
Isanny mampiavaka anAntsohihy ny fananany ny vala fikajiana ireo ganagana dia, antsoina hoe : « fotsimaso ».
Operation smile Tsy mbola misy ny fandidiana, arahi-maso kosa ireo zaza sima
Zaza miisa 62, eo anelanelanny 3 volana ka hatraminny 5 taona manana olana eo aminny ati-vava na sima manerana ny faritra 9 eto amintsika no tafiditra ao anatinny praograma ara-tsakafo izay tarihinny Operation Smile.
ANDRANOVAO AMBOHIMANGAKELY Handrefy ilay tany misy olana ny kaominina
Mba hampirindra araka ny tokony ho izy ny fiaraha-moninireo mponina ao aminny Fokontany Andranovao, kaominina ambanivohitra Ambohimangakely dia fantatra fa hidina handrefy ilay tany misy olana ny kaominina Ambohimangakely sy ny zeometra ato ho ato, taorianny nandrodanana ilay tamboho namefy ny lalam-pokonolona.
Barea Madagascar Efa tafody avokoa, nalaina nisaraka
Efa tafody avokoa ireo mpilalaonny Barea izay nanatanteraka ny lalao fanazaran-tena tany Maroc hoy ny mpanazatra azy ireo Nicolas Dupuis.